जागिर पनि कस्ता कस्ता ? अन्त्येष्टिमा रोइदिनुपर्ने अनौठो जागिर – MeroOnline Khabar
जागिर पनि कस्ता कस्ता ? आफन्तको मृत्यु हुँदा मानिसहरु शोकाकुल हुन्छन् र रुन्छन् पनि । रुने कुरा हृदयदेखि नै प्रकट हुने कुरा हो । तर दुनियाँ यति बनाबटी भइसकेछ कि कसैको मृत्युपछि रोइदिने मानिस पनि भाडामा पाइन थालेका छन् ।
कसैको मृत्युपछि शोकको घडीमा डाँको छाडेर रुनका लागि कोही पेशेवर रुन्चे मानिसहरुलाई पैसा तिरेर भाडामा लिने गरको सुन्नुभएको छ ? यस्तो अनौठो तथा सुन्दैमा अप्ठेरो लाग्ने कुरा विश्वास गर्न गाह्रो पर्दछ । तर यो यथार्थ हो । अफ्रिकी महादेशको एउटा देशमा यो प्रचलन रहेको छ ।
← यस्ता व्यक्तिले उखुको जुस पिउन हुदैन
एउटा अदभुत सत्य घटना टाउको काटेको १८ महिना सम्म कुखुरा बाँचिह्यो →